“ကျယ်စေကောင်း၏့ မကောင်း၏” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ကျယ်စေကောင်း၏့ မကောင်း၏”	7
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 14, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary |7comments
တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ (၃)
ကျနော်ရန်ကုန်ရောက်တုံးက ရွှေတိဂုံဘုရားကို blue hour မှာရိုက်ချင်လို့
ကြည့်လိုက်တော့ ပရဟိတ တံမျက်စည်းလှည်းတဲ့အဖွဲ့က စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံဖြစ်အောင်တန်းစီနေကြတာကြောင့်ပါ။
“စ…. လှဲ တော့” ဆိုတဲ့ အာကျယ်ပါကျယ်အသံထွက်လာတော့ ကျနော်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။
အကျီအဖြူလည်ကတုံး ပုဆိုးအကွက်စိတ် ဟန်းဖုန်းခါးချိတ်
တံမျက်စည်းလှဲတဲ့သူက လူနှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပူးပူးကပ်ကပ်
ဟန်ပြမလှဲပါနဲ့” လို့ အော်သံထပ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
သူ့မျက်နှာက တော့ ခပ်တင်းတင်း ၊
သူ့အော်သံကြောင့် ဘုရားဖူးလာသူအချို့က တံမျက်စည်းလှည်းနေတာနဲ့
ကျနော်ထိုင်နေကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးက မန်နေဂျာက အလုပ်ထွက်သွားပါတယ်။
အဲဒီဆိုင်က စားပွဲထိုးနေတဲ့ ကလေးတွေကို အုပ်ချုပ်ဘို့ခန့်ထားတဲ့မန်နေဂျာပါ။
ဒီဆိုင်မှာထိုင်နေတာကြာတော့ အားလုံးနဲ့ကလဲ နေ့တိုင်းတွေ့ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ
“အာစရိ အကိုက နေမကောင်းဖြစ်တော့ သူတို့လယ်ကို ကြည့်မယ့်သူမရှိလို့ပြန်သွားတာ”တဲ့။
ကျနော်ထိုင်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး က နှစ်ခန်းခွဲထားပါတယ်။
အတွင်းခန်းကတော့ ဆေးလိပ်မသောက်ရလို့ သတ်မှတ်ပြီး အဲကွန်းတပ်ပေးထားပါတယ်။
ငြင်းကြခုန်ကြဆိုတော့ အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာအသံတွေဆူညံပြီး အုံးအုံးထနေပါတယ်။
လူ၀၀ အသားက အနက်ရင့်ရင့် အသံကတော့ခပ်ကျယ်ကျယ်ပါဘဲ။
“ရှမ်းနှစ် အရေဖျော်တစ် ”
” နံပါတ်ဝမ်း ပိုက်ဆံပေးနေတယ်”
“နို့်စိမ်းတီးဝမ်း ဖန်ဆိမ့်နို့စိမ်းကဲ ၀မ်း”
“ဖိုးချမ်း ပုဂံတွေကို ဗန်းနဲ့သယ်”
“ဆီဆမ်း နှစ် ရှယ်မွှေကြော်တစ်”
“ကျောက်ပန်းတောင်း တစ် အကြမ်းပုဂံချပေး”
ဆိုတဲ့အသံတွေက သူ့ဆီကနေ တရစပ်ထွက်နေပါတယ်။
အခန်းကျဉ်းကျဉ်း လူတွေက များမှများ
၀င်သူထွက်သူ ရှုပ်ယှက်ခပ် နေတဲ့အကြားထဲမှာ
ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်ရတာနားမခံသာတော့ အရင်လိုကြာကြာထိုင်ပြီး
သူမပြောလဲ စားပွဲထိုးလေးတွေက သူ့အလုပ်သူ ပုံမှန်ုလုပ်နေကြတာပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် သူ့မျက်နှာပေးကတော့ သူ့ဒီလိုအော်ဟစ် ညွှန်ကြားနေလို့ဘဲ
ဆိုင်တစ်ခုလုံးက လည်ပတ်လှုပ်ယှားနေတယ်လို့ ခံယူထားသလိုပါဘဲ။
ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့အချိန်တွေမှာ ကိုယ့် အရှိန် ကိုယ့်အတွေးနဲ့သာ
မောင်းနှင်နေကြတာကြောင့် ကိုယ်ဘယ်လို ပြုမူနေထိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိမမူမိကြတာများပါတယ်။
ဘေးလူက သာ ကိုယ့် ဘယ်လို နေတယ်ထိုင်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မြင်နေရတာကိုး။
ကျနော်အပါအ၀င်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ သာမာန်လူသားတွေကြောင့် ကိုယ့် အတ္တကိုဘဲ ရှေ့တန်းတင်ကြပါတယ်။
အဲတော့ ကိုယ်တော်ကြောင်းပြဘို့အတွက် သူများညံ့တယ်ထင်ရအောင် ဖန်တီးမိတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ကို သူများအထင်အမြင်ကြီးအောင် ကိုယ်ကအရေးပါ သူဖြစ်အောင် မသိမသာရော သိသိသာသာပြတတ်ကြပါတယ်။
အခုလို တွေးမိ ရေးမိတာတောင် သူများအပေါ် လူတွင်ကျယ်လုပ်သလို
Mike says: “ကိုယ်ဘယ်လို ပြုမူနေထိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိမမူမိကြတာများပါတယ်။”
.အိမ်မှာ မဒမ်မိုက်ဖုန်းပြောရင်အသံအတော်ကျယ်ပါတယ်..အော်ပြောနေသလိုပဲ
.ဒါနဲ့ကျုပ်က တိုးတိုးပြောလည်းတဖက်ကကြားပါတယ်ကွာလို့..သတိပေးလေ့ရှိတယ်..
.တခါတော့ ကျုပ်ဖုန်းပြောနေတာ ကျယ်လို့တဲ့..သမော်ဒီးကလာသတိပေးတယ်..
.ကျုပ်လည်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ဇောကပ်ပြီးပြောနေတော့..ကိုယ့်အသံတော်တော်ကျယ်နေတာမသိ..လိုက်ဘူး…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လောကကြီးက ဒီအတိုင်းပါဘဲ ကိုမိုက်
lu lu says: အလုပ်ရှင်ကလည်း လုပ်အားခ ပေးထားလို့ကျယ်တယ်
အလုပ်သမားကလည်း လုပ် အား ပေးထားလို့ကျယ် တယ်
ဘယ်တော့မှမသင့်မြတ်နိုင်တဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက် ဘဝဗ တွေ
မြစပဲရိုး says: . အော်ခစ်စတာ (orchestra) သံစုံတီးဝိုင်း ကြီး လိုမျိုး မှာတော့ အော် မရလို့ တုတ် လေး နဲ့ အချက်ပြတယ် ကပေါက်ကြီး။
ကပေါက်ကြီး ရဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေမှာ ဘုရားပေါ်တံမျက်စည်း လှည်း တာ ကိုတော့ ညီညာဖို့ အော်နေစရာ မလိုပေမဲ့
စားသောက်ဆိုင် လိုမျိုး မတော့ လိုတယ် ရှင့်။
တစ်ချို့ စားပွဲထိုး လေး တွေ က ခေါ်မကြား,၊အော်မကြား။
စားတဲ့ သူ တွေ ဘာလိုတယ် ဆိုတာ ကို အားလုံးမြင်အောင် ကြည့်နေပြီး အော်ခိုင်း နေတဲ့ မန်နေဂျာ ကတော့ တကယ်ဘဲ လိုတယ်ထင်တာပါဘဲ။
သတင်းစာ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ဖို့ ကတော့ နားထဲ ပိတ်ထားတဲ့ ဟာလေး တွေ ထည့်ထားလိုက်ပေါ့။
aye.kk says: ကျယ်စေတာ၊မကေါင်းဘူးလို့ပဲထင်ပါ၏ကိုပေါက်ရေ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ပြောတာလဲမှန်တယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျယ်သင့်ကျယ်